Yiba yiNgcali yeNtengiso yezeNtlalontle | Martech Zone
NgoLwesithathu, nge-1 kaJanuwari 2014 NgoLwesithathu, nge-1 kaJanuwari 2014 Douglas Karr
Ndifuna ukwaba le infographic ngenxa yolungelelwaniso olukhulu ekuboniseni izakhono eziyimfuneko kwintengiso ukuze ikwazi ukwenza izicwangciso zentengiso zentlalo ngokukuko. Ngokoluvo lwam, mna ngekhe ndicebise nawuphi na umfundi okanye ingcali ukuba ihambe ngendlela yokuba nobuchule kwimidiya yoluntu. Imithombo yeendaba zentlalontle sisijelo esinye sesicwangciso sokuthengisa ngokubanzi. Kuya kufuneka ukuba usebenzele ukuba yiNgcali yeNtengiso ngezi zakhono- kunye nokuqonda ukuba kungena njani kwisicwangciso esiliqili sentengiso kwi-Intanethi.
Amashishini aya esiba nomdla kwimithombo yeendaba zentlalo ukuze babeke iimveliso zabo ngokunxibelelana nabaphulaphuli kunye nokwabelana ngomxholo ofundisayo, owonwabisayo kunye nokhanyisayo. Kodwa ngaba wakhe wazibuza ukuba ngubani osemva kweeakhawunti kweli hlabathi litsha elinenkalipho lokuthengisa ngemidiya yoluntu? I-infographic engezantsi izakujonga oosiyazi bezentengiso ngasemva kwekhethini leli hlabathi libonakalayo, iindlela ezinokubakho kwikhondo lokuthengisa kwintengiso yemidiya, kunye nokuba yeyiphi imbonakalo yelizwe lokwenyani inokuba yeyaba bathengisi babonakalayo. I-infographic nge Izikolo.com
tags: EducationZikoloizikolo.comingcali yokuthengisa kwimidiya yoluntuingcali yokuthengisa kwimidiya yoluntu
Iminyaka emitsha ekhethekileyo-Amawakawaka eMizobo nge- $ 9.95!
Jan 8, 2014 kwi-10: 14 AM
Enkosi, Douglas, ngesi siqwenga siluncedo. Sisikhumbuzo esincedayo sokuba zingaphi iinkalo ezikhoyo kwindlela yentengiso yemidiya yoluntu, mayingabikho intengiso ngokubanzi kwezi ntsuku.